Indlela ukukhetha kubakaki ngoba emashalofini?
Uma unquma kwenye izindonga ekamelweni lakho ukufaka eshalofini, ungakhohlwa futhi ukhethe kubakaki izilungele. Okokuqala, ukunquma indawo ye-design - ke kuzoya kakhulu ngokuthi yikuphi ngokujoyina akazange ukuthola. Ngokwesibonelo, uma uhlela kubo njengoba element zokuhlobisa lapho ngeke kube nalutho ngoyisiwula kusinda isitsha sezimbali miniature, ungakhetha yimuphi izisekelo eshalofini. Into esemqoka ukuthi zihlobana ingaphakathi izakhiwo. Kubalulekile futhi ukuba ukhethe okulungile futhi iziqobosho: amahange noma ihange. Ungakhohlwa acabangele: enkulu ububanzi emashalofini, namandla kufanele kube nokuzibandakanya odongeni.
Ezahlukene odongeni kubakaki ngoba emashalofini ngezinga lomthwalo sivumelekile ku kubo njengokomumo izinto futhi, yebo, ku-amafomu. Iningi ezitolo onobuhle zenzelwe nomthwalo 15-30 kg. Ngokuvamile, ukugwenywa akazihluphi ubani, ngoba isisindo emashalofini, kanye izinto enamathiselwe ingeqi kunani elicacisiwe.
Kukhethwa mathiriyeli ukwakhiwa seshalofu izisekelo, wehlukile ngempela. Ungayeka ukunakwa kwakho ngohlelo lokukhokha ngamancozuncozu olujwayelekile esiqinile ongakhetha steel ukuthenga abanikazi eyenziwe aluminium, bensimbi, bokhuni, imikhiqizo kokuzihlanganisa noma ukhethe ukuthenga imodeli usimende stucco.
Inketho yokugcina ngokuvamile sikhethelwe Interiors classical: ngesicelo bangakwazi lishiywe ezimhlophe, futhi singasetshenziswa ngosizo ucwecwe gilt noma upende ukuze ibukeke zemabula. Yiqiniso, umsebenzi onjalo kufanele esiphathiswe ochwepheshe. Kodwa bheka-iphathwa kubakaki olubunjiwe elingaphakathi elihambisana ngeke kufaneleke kakhulu nenhle. On emashalofini basekela, ungafaka iqoqo zobumba tableware, eziyisikhumbuzo umbukwane, kufanelekile ku isitayela jikelele egumbini, noma Antique vase-Chinese. Ungesabi ukuthi angathembekile futhi awukwazi ukumelana umthwalo. Abakhiqizi kwagcizelela ukhonkolo kubakaki ngoba emashalofini, ngakho zenzelwe umthwalo efanayo, kanye nezinye izinketho.
Uma uthanda Minimalism, ke kungcono ukukhetha okungenani abanikazi lubonakale: ezinye izinketho bawakhohlise ukuthi emashalofini nje isiyalezo odongeni. Kodwa okulala ngokuvamile ukukhetha imikhiqizo metal ezihlotshisiwe. Ekhandiwe yensimbi eshalofini kubakaki enamathiselwe kwemizwa yothando. Inhlanganisela lensimbi elinezinhlangothi isihlahla kungafaneleka egumbini, eyenziwe ezweni isitayela - ukuze ukwazi ukugcizelela malula futsi ukunambitheka omuhle nabanikazi. Kule ndlu ungakwazi neze ukuthi bathole izinto frilly ukuthi kungahlali yokuphila ezindaweni eziphakathi nezwe.
Yiqiniso, khetha ezisekelweni eshalofini kumele kuhambisane ne isitayela jikelele egumbini, kodwa ungakhohlwa ukuthi uhla amanani yalo mkhiqizo ubanzi ngokwanele. Ngokwesibonelo, izingxenye kwachuma zazo ezazenziwe ngesandla, akukwazi ezishibhile. Kodwa ezivamile flat metal iziqobosho ayatholakala iningi. ungakwazi ngokuzimela ukuthuthukisa design kubakaki ozoyenza oda uma uthanda. Yiqiniso, izindleko zabo kuyoba kakhulu kunalokhu, kodwa uzoba umnikazi we okukhethekile imininingwane ingaphakathi.
Indlela ukupheka bhisikidi uju: zokupheka
Umgomo "Nobivac" ngoba izinja namakati
Photo Iphrinta Canon SELPHY CP810: i Uhlolojikelele, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Made insipho ku vkus- master class yakho kusuka Yuli Milshteyn